Obsessive Compulsive Disorder (အစွဲလန်းလွန်စိတ်ဝေဒနာ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Obsessive Compulsive Disorder (အစွဲလန်းလွန်စိတ်ဝေဒနာ)
Obsessive Compulsive Disorder (အစွဲလန်းလွန် စိတ်ဝေဒနာ ) ကဘာလဲ။
အစွဲလမ်းလွန် စိတ်ဝေဒနာ (obsessive compulsive disorder) ဆိုသည်မှာ လူနာ၏ တွေးခေါ်မှုနှင့် အပြုအမှုများကို ထိခိုက်စေသော စိတ်ရောဂါ တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ လူနာသည် အတွေးများ အမြဲပေါ်လာပြီး စွဲလန်းစိတ်နဲ့ တူညီသောလှုပ်ရှားမှုများကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြုလုပ်ပါသည်။ ဥပမာ တံခါးကို သော့ခတ်ထားသလား မထားသလား ဟု တွေးကာ တံခါးဆီသို့ ခဏခဏ သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ လူနာများသည် ထိုသို့တွေးခြင်းကိုရပ်ရန် ကြိုးစား သော်လည်း စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် စိတ်တင်းမာမှု များသာ ထပ်မံ ဖြစ်စေပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် စိတ်သက်သာစေရန် ထိုလှုပ်ရှားမှုများကိုသာ လိုက်လံ ပြုလုပ်ပါတော့ သည်။
Obsessive Compulsive Disorder (အစွဲလန်းလွန် စိတ်ဝေဒနာ ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
obsessive compulsive disorder သည် အသက် ၂၀အောက် များတွင် မကြာခဏဖြစ်တတ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုစေသော ကိစ္စများ ပိုမိုကြုံတွေ့ရသူ များတွင် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဤလက္ခဏာများသည် တစ်ခါ တစ်ရံ သက်သာသွားသော်လည်း အရှင်းပျောက်ခြင်း မရှိပါ။ ပိုမိုသော အချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ပါ။
Obsessive Compulsive Disorder (အစွဲလန်းလွန် စိတ်ဝေဒနာ ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အဓိက ရောဂါလက္ခဏာ သည် စိတ်စွဲလန်းခြင်း ဖြစ် သည်။ စွဲလန်းသော အပြုအမှု သည် ဆေးသုံးခြင်း နှင့် အခြား အခြေအနေများ ကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်း သည်စိတ်ပူပင်မှုကို ဖြစ်စေပြီး နေ့စဉ် ဘဝကို ထိခိုက် စေပါသည်။ စွဲလန်းခြင်း အပြုအမှု အမျိုးအစား များစွာ ရှိပါသည်။ ဥပမာ-
ထိတ်လန့်ဖွယ် ပုံရိပ်များ မြင်ရသည်ဟု မလိုချင်သောအတွေးများ တွေး မိခြင်း
အမှားများ အတွက် တာဝန်ရှိသည် ဟု ခံစားရခြင်း၊ မကောင်းသော အရာများဖြစ်လာတော့မည်ဟု တွေးထင်ခြင်း
အညစ်အကြေး များ ပေကျံမည် ကို အလွန်အကျွံ စိုးရိမ်ခြင်း
ညဘက်တွင် စက်ပစ္စည်းများ ပိတ်ထားသလား၊ တံခါးများ သော့ ခတ်ထားသလား နှင့် ပြတင်းပေါက်များ ပိတ်ထား သလား သေချာစေရန် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထ၍ ကြည့်ခြင်း
အဝတ်များ၊ ဖိနပ်များ၊ ပန်းကန်ပြားများကို တူညီသော အစီစဉ် ဦးတည်ချက် တစ်ခုတိုင်း စီခြင်း
ရောဂါပိုးကူးမည်ကြောက်(မကူးနိုင်သော်လည်း) လက်ကို အမြဲ ဆေးနေခြင်း
လူနာများသည် ထိုအချက်များကို မလုပ်ချင်သော်လည်း ထိန်းချုပ်၍ မရဖြစ်နေသည်။ စွဲလန်းသော အပြုအမှုများ သည် နေ့ပိုင်းတွင် ပို၍ ဖြစ်ပေါ်ပြီး အကျိုးရှိသော အလုပ် များ လုပ်ရန် ခက်ခဲစေပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြ မထား သော အခြားလက္ခဏာ များ လည်းရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်ဆီတွင် ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ခုခုများ ရှိနေသည်ဟု စိုးရိမ်မိပါက ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင် သင့်ပါသည်။
အောက်ပါတို့ဖြစ်ပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။
စွဲလန်းမှုရောဂါသည် သင့်ဘဝကို အလွန် လွှမ်းမိုး လာသော အခါ
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း သို့မဟုတ် သေကြောင်းကြံရန်၊ လူသတ်ရန် အတွေးများ ဖြစ်ခြင်း စသည့် လက္ခဏာများ ဖြစ်ပါက ဆရာဝန် နှင့်ပြသပါ။
Obsessive Compulsive Disorder (အစွဲလန်းလွန် စိတ်ဝေဒနာ ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
လက်ရှိတွင် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် obsessive compulsive disorder ရောဂါ အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ရောဂါဖြစ်စေသော အချက်များ တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်။
ဦးနှောက်၏ အချို့နေရာများတွင် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များ ရှိခြင်း
ငါ့ဆီမှာ Obsessive Compulsive Disorder (အစွဲလန်းလွန် စိတ်ဝေဒနာ ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
စွဲလန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု ဖြစ်နိုင်ချေ ကို မြင့်စေသော အချက်များမှာ-
မိသားစုရာဇဝင်။ မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များတွင် obsessive compulsive disorder ဖြစ်ဖူး ပါက သင့်တွင် ဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်ပါသည်။
ဘဝတွင် စိတ်ဖိစီးစေသော ကိစ္စများ ကြုံတွေ့ရ သောအခါ သို့မဟုတ် စိတ်ဖိစီးမှုကို တင်းမာစွာ တုံ့ပြန်သောအခါ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်တက်စေ ပါသည်။
Obsessive Compulsive Disorder (အစွဲလန်းလွန် စိတ်ဝေဒနာ ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်များသည် သင်ဖော်ပြသော ရောဂါလက္ခဏာ များပေါ်မူတည်၍ ရောဂါအဖြေထုတ်ပါသည်။ ဆရာဝန်သည် သင့် ရောဂါလက္ခဏာများ၏ အခြားဖြစ်စေနိုင်သော အချက် များကို ဖယ်ထုတ်ရန် ဆေးစစ်မှုကို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ဆရာဝန်သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်မှု ကိုလည်း ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း နည်းလမ်း တွင် ဆရာဝန်သည် လူနာ၏ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်၊ ပြောဆိုပြုမူ ပုံ ကို လေ့လာခြင်း နှင့် အတွေးအခေါ်များ၊ စိတ်နေစိတ်ထား၊ တစ်ပါးသူအပေါ် ယုံမှားသံသယ လွန်ကဲမှု၊ ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်မှု၊ ပစ္စည်းများကို အလွဲသုံးရန် စွဲလန်းခြင်း၊ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်လိုခြင်း သေကြောင်းကြံစည်လိုခြင်း တို့ အကြောင်းကို မေးမြန်းရန် လိုပါသည်။
Obsessive Compulsive Disorder (အစွဲလန်းလွန် စိတ်ဝေဒနာ ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
obsessive compulsive disorder ကို စုပေါင်း ကုထုံး နှင့် အပြုအမူသိမြင်ခြင်းကုထုံးဖြင့် ကုသနိုင်ပါ သည်။
ဆေးပေးခြင်း။ ဆရာဝန်သည် စိတ်စွဲလန်းခြင်း နှင့် ထပ်ခါ ပြုလုပ်သော အကျင့်များကို ထိန်းချုပ်ရန် ဆေးပေး နိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် စိတ်ကျရောဂါ ပျောက်ဆေး များ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါတို့ပါဝင်ပါသည်။
အပြုအမှု သိမြင်ခြင်းကုထုံး။ မဟုတ်မှန်သည်များကို တွေး ထင်နေပါက အချိန်ကြာလာသောအခါ စိတ်ရောဂါ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အပြုအမှု သိမြင်ခြင်း ကုထုံး သည် ထိတ်လန့်မှုကို ဖြစ်စေသော အတွင်းစိတ်ကို ရှာဖွေပေး နိုင်ပါ သည်။ ထို့နောက် အပြုအမှု ကုထုံးနှင့် ထိုသို့မတွေးစေသော အခြား အကျင့်များ အတွက် လေ့ကျင့်ခြင်း လမ်းညွှန်မှု တို့ကို လုပ်ကိုင်ပါ။ ထိုသို့ ထပ်မံမတွေးတော့ပါက ရောဂါ လက္ခဏာ များ ပျောက်ကင်းပါမည်။
လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် obsessive compulsive disorder ကို ကုသရာတွင် ဘယ်လို အထောက် အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် obsessive compulsive disorder ဖြစ်ခြင်း ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
ရောဂါလက္ခဏာများ ဆက်ရှိနေပါက သို့မဟုတ် ကုသမှု ခံယူပြီး ပိုဆိုးလာပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ပါ။
ရောဂါလက္ခဏာ အသစ်များ သို့မဟုတ် ဆေး သောက်စဉ်တွင် နေလို့မကောင်းခြင်း ဖြစ်ပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ပါ။
အားကစားကို တော်သင့်ရုံ ပြုလုပ်ပါ။
သက်သာသွားပြီထင်ရသော်လည်း ဆေးများကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ ဆေးသောက်ခြင်းကို ရပ်လိုက်ပါက ရောဂါ ပြန်ဖြစ် နိုင်ပါသည်။
ဆေးများနှင့် အခြား ဓါတ်စာများ အသုံးမပြုမီ ဆရာဝန်နှင့် ဆက်သွယ်ပါ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 21, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 21, 2018
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., & Albert, R. K. (2009).The Merck manual home health handbook.Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Print edition. Page 860